Su’aalo & Jawaabo Diini ah – Wajibad
Su’aalo & Jawaabo Diini ah
Abdimaalik Osman Adan
Bacda salaan walaalyaal waxaan halkaan Hoose Idin kugu soo gudbinay su’aalo diini ah oo wato jawaabahooha, kana faa’ideysta. Wixii qaldan oo aad aragtaan E-mailka hoose noogu soo gudbiya idinkoo mahadsan.
Su’aalo Iyo Jawaabo Ku Saabsan
Siiradda Suubanaha Rasuulka (csw)
1: Dhufayl ibnu Camr Al-Dawsi wuxuu ahaa nin Sharaf leh, Gabyaa ah, Caqli badan, Qoladiisana Kaabba-Qabiil u ah. Waxa weeye. Reer Daws waxay ahaayeen dad reer Yaman ah, lehna qaab maamuloo sida Boqortooyada ah.
Dhufayl markuu Islaamay buu qoladiisii ku laabtay. Kolkuu aabbihiis oo oday da’ ahaa u tegay, buu ku yiri: ‘Iga leexo aabbe aniguna kaama tirsani adna igama tirsanide’. Wuxuu yiri: ‘Wiilkayoow maxaa dhacay’. Dhufayl wuxuu yiri: ‘Waan islaamay, waxana aan raacay diintii Maxamed ‘Sallallaahu calayhi wasallam”. Wuxuu yiri: ‘Nabiguu doonaba ha ahaadee, diintaydu waa diintaada’.
Dhufayl baa markaas yiri: ‘Hadday sidaas tahay orodoo soo qubayso, dharkaagana soo daahiri, si aan wixii la’isoo baray kuu baro’. Odayagii intuu baxay oo soo qubaystay, dharkiina soo daahirsaday, buu u yimid, markuu islaanka u sharxay, una bandhigayna wuu islaamay. Sidoo kale, Dhufayl waxa uu islaamka ugu yeeray xaaskiisii, wayna islaantay.
Qoladiisii reer Daws markii hore diinta ma aanay qaadan. Markaas buu intuu Suubbanaha ‘Sallallaahu calayhi wasallam’ u tegay ku yiri: ‘Nabigii Alloow Daws way i diideene inuu Alle balaayo ku rido u bari’.
Suubbanuhu ‘Sallallaahu calayhi wasallam’ halkuu ka habaari lahaa buu reer Daws u duceeyay, wuxuuna yiri: ‘Alloow Daws hanuuni’. Markuu u duceeyay kaddib wuxuu Dhufayl ku yiri: ‘Tolkaa ku noqo oo diinta ugu yeer una tartiibi’.
Raggii gacanta Dhufayl ku islaamay waxa kamid ahaa Abuu-Hurayra (RC).
Dhufayl siduu Qoladiisii Daws islaamka ugu baaqayay ayay tartiib tartiib u islaameen ilaa ay toddobaatan ama siddeetan Qoys oo Qoladiisa ka tirsani Madiina ula haajireen, dagaalkii Xulafadu markuu dhammaaday kaddib. Dhufayl wuxuu ku shahiiday dagaalkii Yamaama.
Su’aal 2: Waxaad sheegtaa magacyada xayawaankada ee suuradaha Qur’aanka ku jiraan waa kuwan:
Jawaab 2: Magacyada xayawaanka ee suuradaha quraanka ku jiro waxaa ka mid ah:
Waxan weliba ku deri karnaa Al-Ancaam (Xoolaha).
Su’aal 3: Sheeg Nabigii laga soo saaray waddan afrikaan ah.
Jawaab 3: Nabi Muuse (cs) waxana laga soo saaray Masar.
Su’aal 4: Waxaad sheegtaan Nabiga markuu ka soo hijrooday Makka ee uu Madiina imaaday saxaabiga uu ku deggay magaciisa?
Jawaab 4: Hijradii Nabiga (scw) ee Madiina wuxuu Nabigu (scw) ku degay guriga Abuu-Ayuub (Khaalid ibnu Zayd) Al-Ansaari oo ahaa reer Banii Najjaar .
Su’aal 5: Markuu Makka furtay Suubbanuhu Rasuulka (scw) wuxuu ciidamo u kala diray asnaamtii waaweynayd ee la caabudi jiray, siiba kuwii uu Qur’aanku sheegay ee Laata, Cuza iyo Manaat oo ugu caansanaa Jaziiradda Carabta. Cuza oo ahaa sanamkii ugu weynaa ee Quraysh oo dhami ay caabudi jirtay, wuxuu Suubbanuhu Sallallaahu calayhi wasallam u diray Khaalid ibnu Waliid (RC) oo wata 30 nin oo fardoolay ah, wuxuuna amray inuu soo dumiyo, waxaana maamulka Cuza hayay reer banii Shaybaan.
Sidoo kale sanamkii Suwaac la oran jiray oo yaallay meeshii la oran jiray Barhaad oo saddex mayl u jirtay Makka, ayna caabbudi jireen reer Hudayl, wuxuu Suubbanuhu Sallallaahu calayhi wasallam u diray ciidan uu hoggaaminayo Camr ibnu Caas (RC).
Sidoo kale sanamkii la oran jiray Manaat oo ay caabudi jireen qabiillada Aws, Khazraj, Qasaan iyo dad kaleba wuxuu Suubbanuhu Sallallaahu calayhi wasallam u diray 20 nin oo fardoolay ah oo uu madax u yahay Sacad ibnu Zayd Al-Ashhali.
Su’aal 6: Saxaabigii keenay fikradii ahayd in god laqoto dagaalkii Axzaab
Jawaab 6: Wuxuu ahaa Salmaan al-Faarisi
Suaal 7: Aayaddii waxay Qur’aanka kusoo aroortay laba jeer,
Jawaab 7: Waa Surat al-Xijri iyo Surat al-Dariyad.
Su’aal 8: Waxaad sheegtaa ninkii u baxay inuu Nebiga (csw) soo dilo
Jawaab 8: Wuxuu ahaa Cumeyr binu Wahab, oo wiilkiisii oo dagaalkii Bedel lagu qafaashay nin soo deynaa iska dhigaayey. Ninkii kafaalo qaaday caruurtiisa Cumeyr deyntiina lagu lahaana yiri anaa bixinaa waa (Safwaan binu Umayah), go’aankaasna waxay ku qaateen iyagoo ag fadhiyay (Xijri Ismaaciil) oo ka tirsan kacbada Sharafta badan.
9) Haweeneydii calaalisay beerkii nebiga adeerkii XAMZA waxay ahayd HINDA BINTU CUTBAH oo ahayd xaaskii ABU SUFYAAN, dhashayna hogaamiyihii weynaa ee MUCAAWIYA, waxayna ahayd dagaalkii UXUD, iyadoo uga aargudaneysay mubaarasadii lagu dilay aabaheed, adeerkeed iyo walaalkeed, taas oo uu nebiga adeerkii Xamza (RC) dhanka kale kasoo jeeday, waloow ay markii dambe soo islaamtay furashadii MAKKA.
10) Maryama Bintu Cimaran hooyadeed waa XANNAH BINTU FAAQUUD, waxayna ku qiirootay (ta’athurtay) iyadoo aragtay shimbir caruurteeda cunto siineysa, markaaseey jecleeysatay iney caruur hesho, Allena (swt) weydiisatay inuu Oowlaad siiyo waana ka aqbalay wuxuu siiyay MARYAMA BINTU CIMRAAN oo Nebi CIISE hooyadiis ahayd.
11) Waxaad sheegtaan Saciid binu caamir aljumaxi Ninkii uu arkaayay isagoo ay dilayaan kufaaru qureesh Magaalada Maka, xiligaana uu ahaa isagana mushrik?. Raggaasxaabta Nabiga (scw) kamid ah ooy Qurayshi ku dishay Makka intii aanay muslimiintu qabsan waxay ahaayeen saddex nin. Nin wuxuu ahaa: Yaasir iyo Islaantiisii Sumaya, waxa weeye Cammaar ibnu Yaasir labadiisii waalid. Ninka labaad waxa weeye: khubayb ibnu Cadiy. Ninka saddexaadna wuxuu ahaa Zayd ibnu Dathina. Waa haddii aad dil naf goyn ka waddo. Wallaahu aclam.
Su’aal 12: Waxaad sheegtaan Aayada ugu yar Qur’aanka Kariimka?
Jawaab 12: Waa (Thuma Nadara).
Su’aal 13: Waxaad sheegtaan Digaalkii uu ku geeriyooday C/laahi Binu Rawaaxaa?
Jawaab 13: Wuxuu ahaa Dagaalkii (Mu’ta).
Su’aal 14: Waxaad sheegtaan Qaalataa imsaa Quraanka ku jirta? iyadoo uu alifka kutaagan yahay?
Jawaab 14: 2 jeer
(Qaalataa ataynaa dhaa’iciina). (Surat: al-Fussilat)
(Qaalataa laa nasqii xattaa yasdura-Rucaa’u). (Surat: al-Qasas)
Su’aal 15: Waxaag sheegtaan Gabyaagii Rasuulka (scw)?
Jawaab 15: Gabyaagii Nabigu (scw) wuxuu ahaa (Xassaan ibnu Thaabit).
Su’aal 16: Waxaad sheegtaan magaalada Makka saxaabadu markaay gaareen 30 qofood qiyaastii gurigee baa lagu dukan jiray si qarsooni ah? Saxaabigaas magaciis?.
Jawaab 16: AL-ARQAM IBNU ABIL-ARQAM.
Su’aal 17: Waxaad sheegtaan Saxabigii jaliilka ahaa oo abuu Bakar iyo Nabiga (scw) ku yiraahdeen Caano inoo lis? kadibna Saxaabigaas wuxuu weeydiista in uu baro waxa ay kusameeyeen Ceesaatu?
Jawaab 17: Saxaabigaa wuxuu ahaa Cabdulaahi Binu Mascuud.
Su’aal 18: Balqiisa bintu mujaaxid yaa ugeeyay warqadii loo diray ? yaana soo arkay in ay yihii mushrikiin?.
Jawaab 18: HUD-HUD
Su’aal 19: Waxaad sheegtaan Asaxaabul Kahf imsaa ayay kujireen godka?.
Jawaab 19: 309 SANO.
Su’aal 20: Waxaad sheegtaa Masjidkii ugu horeeyay uu dhisay Nabi Muxamed (scw)?
Jawaab 20: Masjid Al-Qubaa.
Su’aal 21: Waxaad sheegtaan Awalu Rasuul keebuu ahaa?
Jawaab 21: Waa Nuux (csw).
Su’aal 22: Kalimada ama magaca Muxammad imisaa ku jirta Quraanka?
Jawaab 22: 4 jeer quraanka
(مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ) Faxi, Aayada 29-aad kafiiri
(وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ) Muxammed, Aayada 2-aad kafiiri
(وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ) al-Cimraan, Aayada 144-aad kafiiri
(مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ) Al-Axzaab, Aayada 40-aad kafiiri intaa oo kali ah ayaa ku jirta quraanka (Muxammed)
Su’aal 23: Waxaad sheegtaa Muhaajiriintii u hijrootay magaalada Madiina qofkii ugu horeeyay oo galay kee buu ahaa?
Jawaab 23: Abuu Salama oo looyiqiinay Ibnu Cabdi Asad.
Su’aal 24: Waxaad sheegtaan suurada quraanka ka midka ah oonan lagu arag xarafka miim (ć)? Markii laga reebo Bisimka.
Jawaab 24: Waa suuratul Kowthar ama inaa Acdheenaa.
Su’aal 25: Waxaad sheegtaan Suurada iyo Aayada ay ku jirto haweeneeyda lagu xusay Quraanka kariimka ah looguna magac daray (Imra-atu kharqaa) ama (Awil kharqaa)?
Jawaab 25: Waxaay ku jirtaa Suurada Al-Naxli Aayada 91 ee halkaa kafiiriya
Inta qofood oo isku dayday in aay kajawaabaa waa 4 qofood
A/raxmaan D, Osman 2 ayuu kajawaabay
Xuseen C/lle 3 ayuu kajawaabay
Guure 1 ayuu kajawaabay
Q,qujuc 1 ayuu kajawaaba
Su’aal 26: Magca Al imaam Ashaaficii?
Jawaab 26: Maxamed Ibnu Idriis ibnu Cabaas ibnu Cothmaan (Abuu Cabdulaahi) (QAZA) ayuu ku dhashay asagoo laba jir ah ayuu MAKAH yimiday (raximahulaa).
Su’aal 27: Waxaad sheegtaa Adkaarta la aqriyo marka laga soo baxo musqusha?
Jawaab 27: (Qufraanaka)
Su’aal 28: Ninkii uu u bixshay Nabiga (scw) Seeyfulaahil masluul ?
Jawaab 28: Khaalid Ibnu Waliid, ‘markii laga soo laabtay Qaswatul Mu’taa laguna soo guuleeysatay ayaa magacaas loo bixiyay;’
Su’aal 29: Imasa suurado ayaa ku bilwda xarafka (Qaaf)?
Jawaab 29: Waa 8 suurat ‘sida aan aniga u fahmay’
Suuratul Mujadalah’Qad Samicalaahu qowlal latii:
Suuratul Jini ‘ Qul uuxiya ilaya”
Suurat Ikhlaas ‘ Quhuwalaahu Axad’
Suurat al-Falaq : Qul acuuthu birabil Falaq’
Suurat an-Naas’ Qul acuuthu birabinnaas’
Suurat al-Muminuun’Qad aflaxal muminuuna’
Suurat al-Kaafiruun’ Qulyaa ayuhal kaafiruun’
Su’aal 30: Waxaad sheegtaa macaga wiilkii ku hooyada ahaa nabiyullaahi Yuusuf (CS)?
Jawaan 30: Binyaamiin binu Yacquub
Su’aal 31: Keebuu ahaa kii sheegtay Nabinimo baadhil ah xiligii Nabi Muxamed (scw) uu noolaa? magacii uu u bixiyay?
Jawaab 31: Museeylamatul kadaab
Su’aal 32: Waxaad sheegtaan Afar aanan ladhalin oo qur-aanka ku jirta oo nafleey ah? hadii aan idiin bayaaniyo 2 bina aadam 2 xayawaan?
Hasiishii nabi saalix
Wankii Nabi Ibraahim
Su’aal 33: Waxaad sheegtaan ninkii dilay Xamsa ibnu Cadulmudhalib oo Nabiga adeerkiis ahaa?
Jawaab 33: Waxshi
Su’aal 34: Waxaad sheegataa Beertii loo yaqiinay Xariiqatul-Moowt, Saxaabigii yiraaxday haliigu tuura aniga ayaa idin furaaye?
Jawaab 34: baraa Binbu maalik (Rxh) waa saxaabigii minjiniiqa lagu tuuray albaabkiina furay.
Su’aal 35: Waxaad sheegtaan Saxaabigii jaliilka ahaa oo taladiisa lagu laayay yahuudii daganeyd Madiina Reer Baynu Qureeydha ? saxaabigaas digaalkee buu ku dhaawacmay?
Jawaab 35: ………………?
Su’aal 36: Waxaad sheegtaan aayad Quraanka ku jirta oo wax dhibic ah aan laheeyn? (Sida Shiin ama Ba’)
Wawaalidin wamaawalada. (Balad)
Alaahu alsamadu (Ikhlaas)
Su’aal 37: Waxaad sheegtaan Abuu Darr al-Qafaari magaciisa?
Jawaab 37: Jundub binu junaada
Su’aal 38: Imsaa kujirta qur-aanka kalimada Barzakh? ama Barzakhan oo alif ku taagan? mana badna ee la socdo.
Su’aal 39: Waxaad sheegtaan Furashadii Maka CIKrima Abii Jahal xageebuu u cararay?? yaa u weydiiyay in lacafiyo Cikrima?
Jawaab 39: Wuxuu ucararay dhinaca yemen iyo ithoobiya Xaaskiisa ayaa Nabiga (scw) u tagtay oo la oranjiray (umu xakiim bintul xaarith)
Su’aal 40: Waxaad shegtaan khadhiibkii Rasuul (scw)?
Jawaab 40: Thaabit ibnu Qays
Su’aal 41: Keebuu ahaa kii rabay in uu Dilo Nabiga (scw), Una soo qaatay dhagax iyadoo Qureesh ay wada fiiranayaan Magaalada maka gudaheeda, Nabiga (scw) xiligaasna uu salaad kujiray Ilaahna kabadbaadiyay?
Jawaab 41: Abuu-Jahal
Su’aal 42: Magaalada Dhaa’if markuu aaday Nabiga (scw), kadib ay ku soo dhagax yeeyeen saxaabigii la socday magaciis?
Jawaab 42: Zayd ibnu Xaaritha
Su’aal 43: Waxaad sheegtaa saxaabigii Malaa’igta ay dhaqday digaalkii Uxud?
Jwaab 43: Xandhala ibnu Abii-Caamir
Su’aal 44: Waxaad sheegtaa Nabi Nuux wiil kiisii ku kharaqmay (ku dhintay) Biyihii; ALLE uu yiraahda kamid ma aha ahal kaada, sheeg magaciisa?
Jawaab 44: Kancaan ibnu Nuux
Su’aal 45: Waxaad sheegtaan (4) afar kamid ah magaca GEELA oo lagu sheegay quraanka?
Naaqa, Al-shucaraa 155
Jamal, Al-Acraaf 40
Baciir, Yuusuf 62,72
Ibil, al-Ancaam 144
Su’aal 46: Waxaad sheegtaan Magacyada 2 haween oo wada nuugiyay NABIGA (scw) iyo Xamza binu Cabdul-Muttalib?
Jawaab 46: Waa Thuwayba, oo aheed Moolaa Abii Lahab iyo Xaliima Ibnu Abii THuweeyba.
Su’aal 47: Waxaad sheegtaan Haweenaydii Nabiga (scw) kutiraahday waan kula dhashay (xaga nuugmada) markii laqeeybsanaayay qaniimadii dagaalkii Xuneeyn Ama Dhaa’if ?
Jawaab 47: Shaymaa bintul-Xaarith ibnu Cabdil-Cuza (Abuu-Kabsha) .
Su’aal 48:Thumaama ibnu aathar xagee lagu xiray xiligii lasoo qabtay?
Jawaab 48: Thumaama ibnu Athal Al-Xanafi waxaa lagu xiray tiir kamid ah tiirarka masjidka Nabiga (scw).
Su’aal 49:Yaay kusoo dagtay [Aayada 15aad ee suuradda al-Axqaaf] Sababu nuzuul keeda??
Jawaab 49: Waxay kusoo degtay Abuu-Bakar Al-Siddiiq (RC).
Su’aal 50: Waxaad sheegtaan, yaa kasoo waday Cabdul mudhalib magaalada Madiino xiligii uu yaraa? Yaaynan kaa hoos bixin su-aashan!
Jawaab 50: Waxa Madiina iyo reer abtigiis Banii-Najaar kasoo waday Adeerkiis Mudhalib ibnu Cabdi Manaaf.
Su’aal 51:Munaafiqii weeynaa Kacab Ibnu Ashraf Labadii lasoo balantay, Balantaas oo lagu rabay in lagu dilo, waana laguna dilay. Nabiga (scw) ayaana ka dalbaday in lasoo dilo, inta dishay way badan yihiin ee labada la soo gashay mucaahado ama balanta sheeg magacya dooda?
Jawaab 51: …….?
Su’aal 52: Waxaad sheegtaan Rumaaniyiinta ninkii ay dileen oo risaalada loogu dhiibay magaciisa? Taasoo kaliftay in lagu duulo. dagaalkii MU’TA
Jawaab 52: ………………?
Su’aal 53: Safwaan ibnu Umayi oo ka wareejiyay farakii Qureesh dhinaca Riyaadh ayna rabeen in ay ka galaan Safarkoodu dhinacaas Shaam. Waxaa sheegtaan Saxaabigii hogaaminaayay Cidankii Muslimiinta? kaasoo soo furtay safaradii.
Jawaab 53: ………………?
Su’aal 54: Waxaad sheegtaan Aayada Quraanka ku jirta uu ku duceeystay NABI MUUSE (cs) Markuu ka cararay Fircoon?
Jawaab 54: ………………?
Su’aal 55: Waxaad sheegtaan Sababu nuzuulka [aayada ku jirta suuradda an-Najmi, 33] ninka ay kusoo dagtay?
Jawaab 55: ………………?
Su’aal 56: Waxaad sheegtaan Digaalkii Uxud Saxaabigii u hor bilaabay Mubaarazada?
Jawaab 56: al-Zubayr ibnul-Cawwaam (Xawaarigii Rasuulka (scw) ahaana ina Safiya bintu Cabdil-Mudhalib Suubbanaha Rasuulka eeddadiis.
Su’aal 57: Waxaad sheegtaan Afarta Khulafaa u raashidiin?
Cabdullaahi (Abuubakr) ibnu Abii-Quxaafa (Cabdullaahi).
Cumar (Abuu-Xafs) ibnulKhadhaab.
Cusmaan (Dul-Nuurayn) ibnu Caffaan
Cali (Abul-Xasan ama Abuu Turaab) ibnu Abii-Dhaalib.
Su’aal 58: Waxaad sheegtaan Kaanataa oo Alifka kutaagan Imsaa kujirta qur-aanka? Xasuuso su-aashii hore waxaay aheed Qaalataa!
كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا [Suuradda al-Ambiyaa, 30]
كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ [Suuradda at-Taxriim. 10]
Su’aal 59: Waxaad sheegtaan xarfaha isku xiran oo ugu badan Qur-aanka? Tusaale>> (Lacalakum) waa 5 xaraf. (Xamii) waa 2 xaraf.
Jawaab 59: Waxaa ugu badan 10 xaraf isku xiran (لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم) [Suuradda an-Nuur Aayada 55]
Su’aal 60: Waxaa sheegtaan saxaabiga kaligii lagu sheegay Quraanka magaciisa? Iyo qofka aanan dhalin oo loogu magacdari jiray?
Jawaab 60`: Zayd ibnu Muxammad
Su’aal 61: Meeymuuna Bintu xaarith Zoowjatu RSC. Markii uu guursanaayay wuxuu udiray Jacfar Binu Abiidhaalib oo uu yiraahday ii la soo hadal in aan guursado ayaa rabaa . Waxaad sheegtaan Meymuuna markii ay ogalaatay Nabiga (scw) Qofkii ay wakiilatay oo ay tiraahday masuul ayuu iga yahaay?
Jawaab 61: Cabbaas ibnu Cabdil-Mudhalib Nabiga (scw) adeerkiis oo qabay walaasheed Ummu-Fadli.
Su’aal 62: Safiya binu xuyayi Zoowjatu RSC. Markuu guursaday wuxuu ku arkay nabar ama midib kaga yeelay Wajiga, Wuuna weeydiiyay kadib way usheegtay, Ee sheeg jawaabtii ay kabixisay?
Jawaab 62: Rasuulkii Alloow intaadan noo imaan waxaan ku riyooday dayaxa oo intuu meeshiisii kasoo go’ay dhabtayda kusoo dhacay, anigoo Ilaah baan ku dhaartaye arrinkaaga (Nabinimadaada) waxba ka ogayn. Waxaan markaas uga sheekeeyay ninkaygii (Kinaana binul-Rabiic bin Abil-Xuqayq oo Yahuudi ahaa). Markaas intuu wejiga iga dharbaaxay ayuu igu yiri: Wallaahi wax kale maahee waxaad jeclaan lahayd in boqorkaas Yathrib (Madiina) joogaa uu ninkaagii noqdo).
Su’aal 63: Waxaad sheegtaan Safiirkii ugu horeeyay Cusmaan Binu Cafaan inta aan loo dirin Magaalada Makka. Waxaa diiday nin saxaabi ah oo ka cudur daartay oo yiraahday Yaa Rasuululaah aniga magaalada Makka Ehel iima joogan ee u dir Cusman binu Cafaan keebuu ahaa Saxaabigaas?
Jawaab 63: Cumar ibnul-Khadhaab (RC).
Su’aal 64: Waxaad sheegtaan Aayada 118 Suuratu Al- Towba, Sadaxda Saxaabi ay ku soo degtay magacyadooda?
Jawaab 64: Waa raggii ka dib dhacay duullaankii Tabuuk, waxayna kala ahaayeen:
Kacab ibnu Maalik,
Muraara ibnu Rabiica iyo
Hilaal ibnu Umaya (RC).
Su’aal 65: Waxaad sheegtaan Aayada quraanka ugu dheer ? Suurada ay kujirta?
Jawaab 65: Waa Aayadda ku jirta [Suuradda al-Baqarah, Aayadda 282]
Su’aal 66: Waxaad sheegtaan Hashii Nabiga (scw) oo aheeyd Qaswaa markii ay kiciweeyday in aay usocoto dhinaca Maka, ooy yiraahdeen saxaabada hashii Nabiga way kici weyday (way tugsatay) oo way daashay, muxuu ugu jawaabay?.
Jawaab 66: (Ma ay tugsan dabeecaddeedna ma aha ee waxaa xabbisay wixii (Maroodigii asxaabul fiil ee Abraha xabbisay).
Su’aal 67: Waxaad sheegtaan saxaabigii Saddex jeer kula baayactamay Geeri Beeycatu Ridwaan keebuu ahaa?.
Jawaab 67: Salama ibnul Akwac ayaa kamid ahaa raggii geeri kula baayactamay Rasuulka (scw) markii Cismaan ibnu Cafaan (RC) oo Makka loo diray uu soo laaban waayay oo waa ladilay suuqa la geliyay, laakiin saddex jeer inay ahayd ma hubo. wuxuu lagal 3 jeer ninkaas Salama ah.
Su’aal 68: Waxaad sheegtaan Imisa Caruur ayuu dhalay Nabiga (scw)?
Faatima bintu Muxammad
Zeynab bintu Muxammad
Ruqiyah bintu Muxammad
Ummu-Kaltuum bintu Muxammad
Ibraahiim ibnu Muxammad
Qaasim ibnu Muxammad
Cabdullaahi ibnu Muxammad
Lixda hore waxa dhashay Ummul-Mu’miniin Khadiija (Ummu Hinda) bintu Khuwaylid bin asad bin Cabdul-Cuza bin Qusay ibnu Kilaab (RC). Ibraahim isaga waxa dhashay Maariya Al-Qibdhiya (RC).
Su’aal 69: Waxaad sheegtaan Suuradda Ka sheekeeyneeyso wixii ku dhacay Reer Banu Nadiir? Yahuudii daganeed madiina.
Jawaab4: Suuradda waa Suurat al-Xashri raqamka 2aad.
Su’aal 70: Waxaad sheegtaan kalimad Quraanka kamid ah oo Suurad ku dhamaato Suuradna ka bilaabato? (Waa kalimad is wadato sida suuratul Ikhlaas ay ugu dhamaato (Axadun)).
Jawaab 70- 1aad: Al-Xamdu lil-Laahi Rabbil-Caalamiina. Waxa ku dhamaata suuradda Al-Zumar (39), waxana ka billaabata Suuradda Al-Faatixa (1).
Jawaabta 70 2aad: Fajri ama walfajri >> waxaay kabilaabataa suurada al-fajri. Waxayna ku dhamaataa Suuratu Al-qadri, oo ah Xataa madhlacil fajri.
Su’aal 71: Rasuulka (scw) Wuxuu lahaa Shaabad ama Stanbo taasoo makuu rabo in uu warqad udiro boqadaga sida Boqprkii Najaas oo kale wuxuu warqada ayuu ku dhufani jiray Shaabad, Ee waxaad sheegtaa Stambadaa wixii ku qornaa iyo sida ay u qornaayeen??
Jawaab 71: Waxaa ku qornaa Muxammadu Rasuul-allaah (Rasuulullaah), wayna is korsaarneyd oo waxay u qorneyd sidan:- waxaa u koreeyay Allah waxaa xigay Rasuul waxaana ugu dambeeyay Muxammed.
Su’aal 72: Boqorkii Muqowqas wuxuu u soodiray Rasuulka (scw) 2 haween (gabdhood) hadiyo ah. Nabiga (scw) mid kamid ah wuu guursaday oo waa Maariya, ee waxaad sheegtaa saxaabiga la siiyay gabdhii kale??
Jawaab 72: Waxaa la siiyay saxaabigii Xassaan ibnu Thaabit.
Su’aal 73: Waxaad sheegtaan Haweeneeydii ama gabadhii u horeeysay oo rumeeyso Rasuulka (scw)?
Jawaab 73: Waa Khadiijo bintu khuweylad.
Su’aal 74: Waxaa sheegtaan (3) Sadax Suuradood oo xarafka KAAF aan kujirin???
Jawaab 74: Waa suuradaha soo socda:
Su’aal 75: Waxaad sheegtaan Suurat Al-Kahfi imisa qiso ayaa ku soo aroortay?
Jawaab 75: Waa afar qiso waxeyna kala yihiin:
Qisadii asxaab al-kahf
Qisadii labada nin ee muslim & mushrik kala ahaa, oo kan mushrika ahaa wuxuu ugu faanay bertiisa kii kale.
Qisadii Nabi Muuse (cs) iyo Qadir.
Su’aal 76:Waxaan ogsoonahay in Salaada loo soo dhiibay Nabiga (scw) Markii la dheelmiyay uuna Gaaray (Sidratul Muntaha), Ee Xageebuu joogay Nabiga (scw) Magaaladee? Goortay soo dageen Axkaanta inteeda kale ??
Jawaabl 76: Axkaamta inteeda kale waxay soo degeen intii uu Nebigu (scw) uu joogay magaaladda Madiina.
Su’aal 77: Waxaad sheegtaan 3 Waqti (ama maalmo ah,) oo la reebay in la soomo???
maalinta ciidul fidr ah.
maalmaha Sabtiga iyo Jimcada, haddii aaynan taxana aheen?
Su’aal 78: Waxaad sheegtaan 8 kamid ah waxyaalaha buriyo Soonka ???
Jawaab78: Waxaa kamid ah:
Kas leysku matajiyo.
Waalida. iyo Cirbid la-isku mudo taa soo siisa nafaqo jirkaada.
Su’aal 80: Waxaad sheegtaan magaalada Makka inta magac oo loo yaqaano?
Waxaa loo yaqaanaa:
Su’aal 81: Qofkii hurdo ka soo toosa aroortii isaga oo janaabo qabo ma soomi karaa? oo soon kiisii ma sii wadan karaa?
Jawaab: Haa qofkaasi waa sii wadan karaa soon kiisa.
Su’aal 82: Waxaad sheegtaan Malakul-Jibriil bishee buu u imaan jiray Nabiga (scw) oo uu quraanka u meerini jira isaga oo la dhameeynaayo quaanka oo dhan?
Jawaab 82: Bisha ramadaanka
Su’aal 83: Abuu_Bakar Al-Sidiiq goormay loo bixiyay naaneystaas ama (kunyadaas) ah al-Sidiiq?? Yaana u bixiyay? Makii loo sheegay Nabiga scw in la dheelmiyay kadibna uu yiraahday waa runtiis. Nabiga (scw) ayaa u bixiyay.
Jawaab 83: Nabiga (scw) ayaa u bixiyay kunyada (as-Siddiiq)
Su’aal 84: Afarta Imaamul madhab, Mid kamid ah ayaa isagoo yar oo Cilma Barasho kujira ayuu wuxuu ku qaldami jiray Mas-alo Fiqi ah , wuxuu maqli jiray in ay janaabadu Qusli waa jibiso, Kadib Markastoo Calooshiisa Qululuc tiraahdaba wuu qabeeysani jiray. Ee kee buu ahaa ????
Jawaab: Wuxuu ahaa Imaamu Al-Nabawi
Su’aal 85: Waxaad sheegtaan Soonka Sunaha ah keebaa ugu ajirbadan ?
Jawaab: Waa Soonka Maalinta Yoomul Carafa.
Su’aal 86: Imisaa ku jirta Quraanka YAA AYUHANAASU ??
Jawaab: Waa 20
Al-Baqara – 2, 168
Al-Nisa – 1, 170, 174
Yuunis – 23, 57, 104, 108
Al-xaj – 1, 5, 49, 73
Luqmaan – 33
Faadir – 3, 5, 15,
Al-Xujuraat – 13
Su’aal 87: Nabiga (scw), 2 Goor ayuu ku yiraahday Abuu-Bakar Al-Siddiiq ((LAA TAXZAN)) Ee waxaad sheegtaan labadaas dhacdo goortii ay dhaceen?
Jawaab 87 1aad: Waa markii ay galeen godka ooy Kufaaru Qureesh ay soo dul istaageen oo uu yiraahday Abuu Bakar Yaa rasuulalaah hadii ay fiiriyaan Lugahooda hoostooda way na arkayaan markaasuu yiraahday NABIGA SCW LAATAXZAN INALAAHA MACANAA
Jawaab 87 2aad: Waa markii uu kadabatagay Suraaqa Binu Maalik isagoo doonaya in uu soo qabto NABIGA SCW iyo Saaxibkiis Abuu Bakar Markii uu ku soo dhawaaday oo uu maqlay Suraaqa akhriska uu akhrinaayo NABIGA SCW ayuu Abuu Bakar ku yiri Yaa rasuulalaah waa uu nasoogaaray, markaasuu ku yiri (Laataxzan Inalaaha Macanaa)
Su’aal 88: Quraanka Imsaa suuradood ayaa ka bilaabato (al-Xamdulilaah) ??
Jawaab 88: Waa 5 suuradood:
Su’aal 89: Waxaad sheegtaan Sannadkii Caamulxusni oo ahaa sanadkii 10aad ee Bicthada Nabiga (scw) oo ay geeriyoodeen Khadiija iyo Abuu Dhaalib ee Sheeg Dhacdadii Dacdadaas kadanbeeysay oo fooshaxumeed?
Jawaab 89: Waxaa ka danbeeyay dhacdadii lagu faqooqay Reer Binu Haashim iyo bani Mudhalib ooy saaraeen Cunaqabateey 2 ilaa 3 Sano. Kadib uu Illaah ka qaaday dhibkii ay ku hayeen, iyadoo lagu diray aboor warqadii ay qoreen, aboorkana wuxuu ka tagay (BISMIKALAAHUMA) oo kali ah, Nabigana (scw) waxyi ayaa loogu sheegay.
Su’aal 90: Beecatul Caqabati-uulaa Balantii labaad, Markii ay la galeen Nabiga (scw) Reer madiina Ansaar. Kee buu ahaa ninkii laga qabsaday iyagoo u sii socdo Magaaladoodii madiina? Waxaana ka qabsaday Kufaaru Qureesh oo ka daba tagtay.
Jawaab 90: Wuxuu ahaa Sacad Ibnu Cubaada
Su’aal 91: Ku saabsan Soonka qofkii sameeyo galmo maalin soon ah waxaa laga rabaa Kafaara gud ee waxaad sheegtaa Kafaara gudka laga rabo?
Jawaab 91: Wuu danbaabay qofkaas oo waxaa laga doonayaa in uu kafaara gud sameeyo, waa sidan ka faara gudka
Adoon in la xureeyo
Laba bilood oo xiriir ah in uu soomo
In uu quudiyo 60 Miskiin
Su’aal 92: Waxaad sheegtaan sannadkii ugu danbeeyay oo laga xarimar gaalada in ay u soo xajiyaan Xaramka? Sannad kaas yaa soo xajjisiiyay saxaabada oo madax u ahaa?
Jawaab 92: Abuu-Bakar Al-Sadiiq RC, Waana sanadkii 9aad ee Hijriyada.
Su’aal 93: Waxaad sheegtaan [aayada 122 ee Suuradda Aali Cimraa], Labada Qolo oo ay kusoo dagtay magacyadooda sheeg? Iyo digaalkii ay kusoo dagtay?
Jawaab 93: Waxaay ahaayeen Reer Binu Xaarith oo Aaws ah iyo Reer binu Salama oo Khazraj ah. Waana dagaalkii Uxud. Markii uu la noqday 300 oo nin munaafiqii weeynaa C/laahi Ibnu Umay ibnu Salool, ayay baqeen iyagana.
Su’aal 94: Umahaatul mu`miniina ama haweenkii Rasuulka (scw) teebaa ugu da`yareed?
Jawaab: Caaisha bint Abiibakar. Markuu la aqalgaley waxey jirtey 9 sanno.
Su’aal 95: Waxaad sheegtaan saxaabigii ugu horeeyay oo loo diro magaalada Madiina si uu u baro Quraanka?
Jawaab 95: Saxaabi dhalinyaro ah oo la oran jirey Muscab lbnu Cumair
Su’aal 96: Nabiga (scw) Markii uu ka geeriyooda wiilkiisii Qaasim ayay gaaladu yiraahdeen kani waa gablamay ee iska dhaafo, Nabiga (scw) aad ayuu ugu xumaaday hadalkaas, kadib waxaa kusoodagtay suurad kaamil ah ee sheeg suuradaas magaceda?
Jawaab: Suuratul kauthar: Kauthar waa webi ama fardaan weyn oo Ilaahey abaalgud ku siiyey Nabiga csw. Waxaa kale oo lagufasiray kheer oo dhan. waxaana soo galaaya kheeyrkaas Kowtharka laftiisa.
Su’aal 96: Waxaa dhici doonta in ay muslimiinta aduunka ay qabsanayaan oo Yahuuda la laaynidoona Geed kasto oo ay galaan ama ay kugabadaan wuxuu dhihi doonaa war nin Yahuud ah ayaa halkan ku gabanaayo ee kaali dil. Su-aashu waxaay tahay waxaa jira Geed Geedaha kamid ah oo u hiilini doona Yahuuda oon Qarinidoona, ee sheeg Geedkaas magaciisa??? Yahuuda Xiligan hada ah ayay beertaa (ku abuurtaa) meelkasto.
Jawaab 96: Geedkaa waxaa la yiraa Garqad ama Qarqad.
Su’aal 97: Baadaad imisa qofood ayuu u diray in la soo qabto Nabiga (scw)?
Jawaab 97: Baadaan inuu magucu ahaa ayaan filayaa wuxuu u diray laba ruux.
Su’aal 98: Waxaad sheegtaan Siddii ay u daaweeysay Caa’isha Rasuulka (scw) oo ay ugu sameeysay dhiigjoojinta markii uu ku dhaawacmay dagaalkii Uxud?
Jawaab 98: Horaa looga jawaabay.
Su’aal 99: Waxaad Sheegtaan waxa ku waajibay qofkii ugu yeera qof kaali aan ciyaarne qamaar?
Jawaab 99: Qofkii qof ugu jeera iney qamaaraan ama qamaar ciyaaraan wuxuu bixinayaa saddaqo sida ka sugnaatay Nabiga (scw).
Su’aal 100: Waxaad sheegtaan qofkii sooma raacsiiya 6 maalmood oo soon ah bisha Shawaal ajarka uu ka helaayo?
Jawaab 100: Qofkii Ramadaanka sooma ee raaciya 6 maalmood ee ka mid ah bisha Shawaal wuxuu la mid yahay qof soomay sannadka oo dhan.
Su’aal 101: Waxaad sheegtaan Cabdullaahi ibnu Maktuub RC makuu Nabiga (scw) u yimid uu yiraahday yaa Rasuulallaahi i bar wuxuu Alle ku baray uuna ka jeestay Rasuulka waxaa ku soo dagtay Suuratul Cabasa ee sheeg dadkii uu la shiraayay Nabiga (scw)?
Jawaab 101: Nabiga wuxuu la shirayey 3 qofood oo ay ka mid ahaayeen Cabaas bin Cabdulmudhalib, Ubayah bin Khalf, Cutba, abii Jahal iyo sheeyba ibnu abii Rabiica oo ahaa hogaamiyayaasha ugu qoora buuranaa Qureysh qaqtigaa. Suurada waxey marka ku siineysaa in uu Ilaahey jecleysan sida rasuulka ula dhaqmey ninkii indhoolahaa ahaa ee u yimid, hase ahaatee marka aad suurada dhemeyso waxaa dereemeysaa iney ku aadaneyd hogaamiyayaasha quresh oo isla weynida ka muujiyey iney xaqa raacaan oo Nabiga (csw) rumeeyaan.
Su’aal 102: Waxaad sheegtaan Quraanka waxaa ku qoran inuu Illaah ku sheegay in uu quraanka uu dhigay 3 meel ee sheeg saddex daas?
Jawaab 102: Tusaale ahaan midkamid ah Quraanka waxaa lagusoo dajiyay Nabigeena Muxamed SCW oo umadiisa ayaa akhriso oo kudhaqanta oo Illah wuxuu yiraahday:
(Inaa Anzalnaahu Quaanan Carabiyan Lacalakum Tacqiluuna) aayada 2aad ee Suuratu Yuusuf.
Waxaa la dhigey Carshiga, Daliil waxaa u ah (Balhuwa quraanun majiidun fiilooxin maxfuudin).
Tan Seddexaad waa tan tilmaameeysa (Kiraamin Bararatin iyo aayadaha kadanbeeya ayaa tilmaamaayo) Suuratul Cabasa.
Su’aal 103: Laba ama saddex meelood oo mamnuuc ka ah in lagu dukado salaadda?
Jawaab 103: Meelaha aan lagu tukan karin waxaa kamid ah:
Xerada geela,, ama meesha lagu waraabiyo, kawaanka hilibka, Musqulaha,
Iyo jid dhexdiis, gebi ahaan toodana axaadiis baa ku soo aroortey
Su’aal 104: Nin kee buu ahaa ninkii uu yiraahday Nabiga (scw) Muslinka god laba jeer lagama qanino? uu amray in la soo dilo.
Jawaab 104: Wuxuu ahaa Abaa Ciisa Al-Jumaaxi oo ay musliiintu qabatey dagaalkii bader, ka gadaal markii uu u dan sheegtey Rasuulka, wuxuu dhalayna Gabdho badan, kadib leyska cafiyey, balana qaadey inuusan muslimiinta dagaal kaga hor imaan doonin.
Hase ahaatee wuu jebiyey oo dagaalkii Uxud buu ka qeyb qaatey waana lagu qabtey. Markii rasuulka (csw) loo keeney buu yiri Maxamadow i fakso mar kalena dagaal muslimiinta ugu hor imaan maanyo. Nabiga wuxuu ku yiri ‘ Mar labaad Makka maku baashaaleysid, nin mu’mina laba jeer god lagama qaniino. Wuxuuna amrey in la dilo.
Su’aal 105: Beeycatu Al-Nisaa bacda fatxu Makka Nabiga (scw) wuxuu yiraahday (Walaataqtuluu oowlaadakum) Hidu Bintu Cutba waxaay tiraahday Caruurtii aan korinay oo weeynaaday waxaad ku laayseen digaal, Ee waxaad sheegtaan wiilkeedii lagudilay digaalkii Badar magaciisa?
Jawaab 105: Wuxuu ahaa Handhala binu Abii sufiyaan oo curadkii Hinda bintu Cutba ahaa, Suuratul AL-Mumtaxina Aayada ugudanbeeysa ayaa tilmaameeysa waxaadna ka heleeysaa Tafsiirka Al-Qurdhubi. Maka heleesiid Ibnu kathiir, Jalaaleeynka iyo Dhabari.
Dagaalkii Badr waxaa lagu diley Hind aabaheed Cutba inb Rabiica, adeerkeed Xudeyfa ibn Rabiica iyo walaalked Waliid ibn Cutba ee ma garanayo meel wiilkeeda lagu diley Badr. Wiilkeeda Mucaawiya ibn abii Sufyaan waa ninkii bilaabey xukunkii Ummawiyiinta.
Su’aal 106: Khoolatu Bintu Thaclaba nin keedii qabay ayaa wuxuu yiraahday, [Anta kathahri calaya umii], (oo macnaheedu yahay hooyadeey ayaad iga tahay oo waan kufuray), Sababtuna waxay sheegayaan bacdi riwaayaadka in uu soo galay gurigiisa, Islaantiisa oo salaadda dukaneysa kadibna uu niyeystay in uu jamaaco uu u tago, wuxuu is celiyaba markay dhameeysatay salaadeedii ayuu ku yiraahday kaali (jamaac) waxaay tiraahday cibaado ayaan ku jiraa ee iga leexo.
Kadib uu furay oo uu yiraahda hadalka aan kor ku soo sheegnay, Nabiga (scw) markii ay u tagtay oo ay u sheegtay wuxuuna ku yiraahday waad furantahay (qiil kuuma hayo) waxaa soo dagay aayado Quraan ah oo tilmaamayo in ay furneen Khoowla.
”Haddaba sheeg suurada ay kujiraan aayadahaas?”
Hadalkaasna waxaa la dhihi jiray waagii jaahiliyada hada waa mamnuuc in aad ku tiraahdii xaaskaada mana ku furanto.
Jawaab 106: Waa biloowga Suurada Al-Mujaadala (Qasamicala)
Su’aal 107: Ninkii Ilaaheey uu ku sheegay quraan kiisa oo ahaa Waliid Binu Muqiir oona lagu tilmaamay inuu WACAL yahay Waladuzinaa iyo dhowr kalmadood oo foolxun uulahaana lagusheegay quraanka, wuxuuna dhalay Khaalid Binu waliid. Waxaad sheegtaan Suurada lagu sheegay? Wiilasha uu dhalay oo lagu qiyaasay in ay garayeen dhoowr iyo toban ama 10 Imisaa kasoo muslintay?
Jawaab 107: Waxaa lagu sheegay [Suurada Al-Qalam Aayadaha 10 ilaa iyo 16]
Su’aal 108: Waxaad sheegtaan Ninkii lagusheegay [Suurat Qaafir Aayada 28aad] magaciisa? iyo Reer Qibdhi miyuu kadhashay Mise Reer Binu israaiil?
Jawaabta 108: Magaciisa waxaa la yiraahdaa Samcaan, wuxuuna ka dhashay Reer Qibdhi.
Su’aal 109: Waxaad sheegataan 12 Rakacadood oo sunatul mu-akida Sunada la adkeeyay ah? Qofkiin joogteeyana Ilaah ayaa janada uga dhisaaya guri sida xadiithka ku soo aroortay.
Jawaabta 109: Waa sidatan:
4 Ka horeeysa duhurka iyo 2 ka danbeeyso
2 Ka danbeeyso Maqrib
2 Ka danbeeyso Cishaha
2 Ka horeeysa Fajarka Salaada subax.
Su’aal 110: Waxaad sheegtaan duulaankii ugu danbeeyay ama Khazwadii ugu danbeeysay inta uusan geeriyoonin Rasuulka (scw)?
Jawaabta 110: Waa Khazwadii ama duulaankii Tabuuk.
Su’aal 111: Kufaaru Qureesh saxaabiga la dilay oo ay doonee in ay ka soo gooyaan gabal Jir kiisa kamid ah si ay u gartaan in uu isaga yahay iyo inkale, Rabina uu kaga badbaadiyay shini, shinidaasoo waardiya ka qabatay in ay maydka saxaabigaa aynan gaaladu qaadanin, saxaabigee ayuu ahaa?
Jawaab 111: ………….?
Su’aal 112: Waxaad sheegtaa dagaalkii Khandaq ama Axzaab 3 mucjiso oo kamid ah mucjisooyinkii Nabiga (scw)?
Jawaab: 112: ……………..?
Su’aal 113: Waxaad sheegtaan ninkii ugu horeeyay oo la dilay saxaabadii loo diray in ay soo baraan Quraanka reer baadiyihii Ahlu Najda ahaa, Gaarayay sida laysku waafaqsan yahay 70 Nin kadib ay dileen dhamaantood wuxuu fariin u waday nin la orani jiray Caamir Binu Aldhufeeyl, kadibna uu u diray nin dila, markuu dhabarka waran kaga dhuftay, ayuu saxaabigii yiraahday Fusdu Warabul Kacbi.
Jawaab: 113: ……………..?
Su’aal 114: Reer Baniqureeda goortii ay duldageen Saxaabada oo ay u timid Cabsi daran Ninkii la dhihijiray Kacab ibnu Asad oo ahaa Madaxdoodii ayaa wuu u soo jeediyay 3 arimood oo uu yiraahday mid kaqaato sadaxdaas, ee sheeg Sadaxdaas?
Jawaab: 114: ……………..?
Su’aal 115: waxaad sheegtaan Saxaabiga looga dhigay Hogaamiye eena watay ciida kadib Reerkii loodiray markuu utagay uu` Diinta u Bandhigay Ay yiraahdeen Saba`naa Saba`naa ooy ulajeedeen in ay diinta qaataa, Ereygaasna waxaay isticmaali jireen goortii ay kabaxayaan Diinta ama waxa ay caabudayaan, Waxaayna garaniwaayeen sidii loosoogali lahaa Diinta islaamka, kadib wax uu laayo iyo wax uu qafaasho ayuu kadhigay ee sheeg saxaabiga hogaaminaayay ciidanka?
Jawaab: 115: ……………..?
Su’aal 116: Waxaad sheegtaan laba Nabi oo loogu abtiriyo (ama loogu yeero) Magaca Hooyadood?
Yuunis Ibnu Mataa iyo
Ciisa Ibnu Maryam
Su’aal 117: Duulaakii Dhaa’if nin keebaa hogaaminaayay mushrikiinta sheeg magaciisa?
Jawaab 117: Waa Maalik Binu Cowf
Su’aal 118: Nabi Shuceeyb gabadhiisu markuu u guuriyay Nabiyullaahi Muuse imsaa sanno ayuu kula heshiiyay in uu Ariga u raaco?
Jawaab 118: 8 Sano, laakiin Wuxuu yiraahday (Fan atmamta Casharan famin cindika) Macnaheeduu uu yahay Hadii aad taam yeesho 10 waa adiga?
Su’aal 119: Nabiga (scw) nin keebuu ahaa niikii uu u bandhigay in uu shahaadada uu qiro? kadibna yiraahday waqti isii kadibna lasiiyay wuxuuna siiyay ilaa sadax bilood, sadaxdiibilood oo lasiiyay ayuu wuxuu niyeeystay in uu dilo Rasuulka (scw) isagoo kacbada kujira, Rasuulka wuxuuna kuyiraahday ninyahoow waxaan ogsoonahay waxa aad rabtiid in aasameeysiid oo qalbigaada kujira wuuna usheegay kadibna wuu Muslimay sheeg ninkaas magaciisa?
Jawaab 119: Fadaala Binu Cumeery
Su’aal 120: Waxaad sheegtaan haweeneeydii hilibka sumeeysan u keentay Nabigeena (scw) magaceeda? Iyo qoladii ay ka dhalatay iyo duulaankii lagu jiray magaciisa?
Seynaba bintu Xaarith,
Dagaalkii Kheybar markuu dhamaaday
Su’aal 121: Waxaad sheegtaan Haweeneeydii loo sheegay in la dilay.
Goortii uu u sheegay Nabiga (scw) uu ku yiraahday waxaa la dilay wallaalkaa/Abtigaa/, markii loo sheegay in la dilay ninkeedii ayay ooysay ee sheeg saxaabiyadaas Magaceeda iyo sadaxdaa shahiiday?
Jawaab 121: Waa Xamnata Binu Jaxshi
Su’aal 122: Imsa ayaa ku jirta Quraanka kalimada ah (yaa bunayi/a/ama yaa banii)? oo qoraalka iskumid ah ku kalabadalan shaqalka.
Jawaab: Waxaa kujirta 3
Su’aal 123: Waxaad sheegtaan haweeneeydii ka qeebgashay digaakii Uxud, waxaana leeb ku dhuftay nin mushrik ah dhulka ayay ku dhacday oo coowradeedii ayaa feeydantay, kaalkiina wuu ku qoslay gabadhii, NABIGA SCW Aad ayuu uga muragoogay oo wuxuu udhiibay leeb aan bir kujirin Sacdi Inbu Abii Waqaas wuuna kudhuftay mushigii, Isagana dhulka ayuu ku dhacay oo coowradiisa ayaa feydantay Nabiga SCW Aad ayuu ugu qoslay oo wuxuu yiraahday NABIGA SCW waxaa u abaalguday gabadha Sacad, ee sheeg haweeneeydaaysa magaceeda?
Jawaab 123: Waa Umu Ayman
Su’aal 124: Waxaad sheegtaan Dagaalkii Kheybar Qeybtii ugu horeeysay imisa (Xisni) ama Dhufeeys ayay ka koobnaayeen aheed?
Jawaab 124: Waxay ka koobnaayeen 5 Xisni
Su’aal 125: Waxaad sheegtaa Inta magac oo loo yaqaano Duulaankii Badarkii Labaad?
Qoraal Af-Somali, Qoraalo diini ah, su'aal iyo Jawaab, Su'aalo